दसैंमा कोरोना , सुरक्षित बनेर घुम्न जानुस यी १५ स्थानमा! - ParyatanBazar.com
दसैंमा कोरोना , सुरक्षित बनेर घुम्न जानुस यी १५ स्थानमा!
पर्यटन बजार२७ आश्विन २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित
असोज २७ ,काठमाडौँ। घुमफिर गर्नका लागि यतिबेलाको मौसम निकै उपयुक्त मानिन्छ । त्यसमाथि दशैं पनि आउँदै छ । दशैंमा धेरैले घुम्न जाने योजना बनाउँछौं । तर, घुम्ने ठाउँको बारेमा जानकारी नहुँदा अलमलिइरहेका हुन्छौं । घुम्न जाने ठाउँबारे पर्याप्त पूर्वसूचना नहुँदा रमाइलो गर्न जाँदा सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था समेत आउँछ । घुम्न जाने समस्या सँगै यसपाली कोरोना को पनि उच्च जोखिम नै छ । तर सुरक्षित बनेर यात्रा भने गर्न सकिन्छ । यी ठाउँमा सुरक्षीत बनेर यस सालको दसैँ बिदा को तपाईंले भरपूर मनोरञ्जन उठाउन सक्नुहुन्छ।
यातायात सुविधा सहज भएपछि पछिल्लो समय मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटकको लर्को लाग्ने गरेको छ । जोमसोमदेखि माथिल्लो मुस्ताङसम्मै यातायात सुविधा उपलब्ध छ । यो मौसममा खासगरी माथिल्लो मुस्ताङ घुम्न लायक ठाउँ हो । जोमसोमबाट एक दिनको जिप यात्रामा पुग्न सकिने “हिँड्दा तीन दिन” उपल्लो मुस्ताङमा यहाँको फरक जीवनशैलीले लोभ्याउँछ । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि मुस्ताङी राजाको ठाँट र सम्मान नमूनाकै रुपमा रहेको छ । मुस्ताङ क्षेत्रमा कागबेनी, नौतले गुफा, थकाली संस्कृति, मनमोहक प्राकृतिक दृश्य र कोरला नाका प्रख्यात छन् ।
पृष्ठभूमिमा कञ्चनजंघा र कूम्भकर्ण हिमाल देखिनेछ । धार्मिक दृष्टिकोणबाट पाथिभरा माताको दर्शन पनि निकै फलदायी हुनेछ । पूर्वी नेपालको चीनसँग जोडिएको ओलाङचुङगोलासम्मको यात्रा त अविश्मरणीय नै बन्नेछ ।
८. रुवी भ्याली
तामाङ समुदायको मौलिक मेन्दोमायासँगै लाखे नाच, माने नाच, पारु नाच यहाँ भेटिनेछ । रुवी भ्याली यात्राको अर्को विशेषता यहाँको दशैंको माहौल पनि हो । स्थानीय भाषामा ‘मार हान्ने’ भन्ने चलन अनुसार युवाहरुले दशैंमा राँगा काट्ने गर्छन् । रसुवाको लाङटाङबाट गत्लाङ हुँदै रुवी भ्याली पदयात्रामा निस्कियो भने गणेश हिमालको आकर्षक दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम उपहार हो खप्तड । डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको संगम स्थलमा रहेको खप्तड क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिमकै भूस्वर्ग पनि भनिन्छ । बैशाखदेखि असारसम्म यहाँका फाँटहरु रंगीचंगी फूलहरुले ढाकिन्छ । खप्तड क्षेत्रको मुख्य विशेषता भनेकै विशाल फाँटहरुमा फुल्ने फूलहरु हुन् । खप्तड क्षेत्रमा खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, खप्पर दह, शिव मन्दिर, सहस्रलिंग, गणेशस्थान, नागढुंगा, केदारढुंगा जस्ता धार्मिक स्थलहरु छन् । ठूला(साना गरी २२ वटा फाँट पनि यहाँको आकर्षण हो ।
१३ . दामन
दामन पनि काठमाडौंबाट नजिकको गन्तव्य हो । मकवानपुर जिल्लामा पर्ने दामनमा खासगरी हिँउ खेल्न जाने गरिन्छ, हिँउद याममा । अहिले गर्मी याम छ । दशैंमा दामनसम्मको यात्रा किन नगर्ने ?
कुलेखानीस्थित मानवनिर्मित इन्द्रसरोबार ताल देशकै एउटा फरक गन्तब्य स्थल हो । चन्द्रागिरी पर्वतको काँखमा अवस्थिति यो तालमा पुग्दा जो कोहीलाई पनि स्वर्गको एउटा भागमा पुगेजस्तो अनुभव हुन्छ । कञ्चन, शान्त र शितल यो तालमा आफ्नो समय विचरण गर्नु आफैंमा अनुपम अनुभव हुन्छ ।काठमाडौं नजिकैको तालमा डुंगा सयर गर्नु सबैको लागि नौलो नै हुन्छ । यस्तै वरपरको हरियाली, तालको वारीपारी चिटिक्क सजिएको मानव वस्ती पनि कम्ता सुन्दर लाग्दैनन् ।
इन्द्रसरोबर राजधानीबाट गाडीमा २ /३ घण्टामै पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँ को बसपार्क वा बल्खु बाट गाडी चढेर इन्द्रसरोबर पुग्न सकिन्छ।
१५. धरान – भेडेटार – धनकुटा
भेडेटार बजार क्षेत्र पूर्वाञ्चलको रमणीय स्थलको रूपमा प्रख्यात छ । भेडेटार दसैँ मा घुम्न जान उपयुक्त अर्को स्थान हो। भेडेटार समुन्द्री सतहबाट १,४३० मिटर उचाईमा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित भएकोले मानिसहरू तराईको गर्मीबाट बच्न चिसो वातावरणमा रम्न र पहाडी एवं हिमाली भेगको सुन्दरता हेर्न आउने गर्दछन । उच्च पहाडमा रहेको बाह्रैमास चिसो हावा बहने हुनाले यहाँ गर्मी मौसममा शीतल हावा खान र जाडो मौसममा पिकनिकको लागि आउने मानिसहरूको भीड लाग्दछ । तराईको गर्मी बाट बच्न केवल एक घण्टा को यात्रा मै पुग्न सकिन्छ भेडेटार।
कसरी पुग्न सकिन्छ ?
यदि तपाईं बाहिर जिल्लाको हुनुहुन्छ भने सुरुमा पूर्व झर्नु पर्ने हुन्छ। धरान बजार सँगै, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा को दर्शन सकेर बस चढेर वा ट्याक्सी चढेर सजिलै एक डेढ घण्टामा गन्तव्यस्थलमा पुग्न सकिन्छ ।